Amabhulogi akuzona izinkundla - Ukuzenza Ithuluzi Elikhulu Lokumaketha Ngokubambisana | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 27, 2007 NgoLwesibili, ngo-Mashi 27, i-2012 Douglas Karr
Ukukhathazeka okulethwa njalo lapho kuxoxwa ngokubhuloga kwamabhizinisi njengecebo lebhizinisi ukwesaba amakhasimende ahambisa izikhalazo zawo. Lapho kubuzwa lo mbuzo ekilasini engikwenze ngesonto eledlule, ngiphuthelwe yiphuzu eliyisihluthulelo engivame ukuxoxa ngalo. Umnyombo walokhu umehluko phakathi kwesithangami nebhulogi.
Yini ehlukanisa iBhulogi Nesithangami?
Abantu bavakashela amabhulogi amabhizinisi ukwakha ulwazi lwenkampani, umkhiqizo, noma insizakalo ngenkathi bakha ubudlelwane ne-blogger.
Abantu bavakashela izinkundla zamabhizinisi ukuze bafune usizo noma banikeze usizo.
Kubhulogi, i-blogger ivula, iholele bese iqhuba ingxoxo. Esithangamini, noma ngubani angakwazi.
Esithangamini, kujwayelekile ukuthi izivakashi zisizane. Kubhulogi, lokho akuvamile kakhulu. Futhi, i-blogger iqhuba ingxoxo.
Iforamu ingahle ivulekele ngokuphelele ukubamba iqhaza. Ibhulogi ingaba nokulawula okwengeziwe ekuphathweni kwamazwana ngisho nekhono lokuphawula nhlobo.
Abafundi bamabhulogi imvamisa bakhe ubudlelwane ne-blogger futhi bathambekele kakhulu ekuvumeni nasekuvikeleni izinqumo zabo. Amaforamu angaphezulu kokukhululekile lapho izivakashi zingahola ngaphezulu kwenkampani uqobo.
Ugcine nini ukungena esizeni futhi uthole 'Iforamu Yezinkonzo Zamakhasimende' lapho ungakhipha khona ukukhungatheka kwakho enkampanini? Ababaningi kakhulu laphaya? Cha… uzocindezelwa kanzima ukuyithola.
Izinkundla eziningi zebhizinisi zisetshenziselwa ukunciphisa izindleko zokuxhasa ngokuvumela abasebenzisi ukuthi basize abanye abasebenzisi. Izinkundla zokuhlela zihle kakhulu ngalokhu, futhi ngincoma kakhulu abantu abasebenzisa lokhu njengecebo lokunciphisa izindleko zokusekelwa. Uma inkampani yakho ine API, uzothola umhlaba wabangane abakulungele ukukusiza esithangamini sabo!
Izithangami nazo zingasetshenziswa, ikakhulukazi ngezinga, ukucela impendulo ngokuhle / okubi kakhulu inkampani engakunikeza ngaphandle kokukhipha zonke izingqinamba futhi ivumele abantu ukuthi bakhale futhi bamemeze. Izinkundla zingaba yinhlolovo nge impendulo… ibaluleke kakhulu kunenhlolovo kuphela.
Ngeke uzithole zisetshenziselwa insizakalo yamakhasimende, noma kunjalo. Uma ngikhuluma iqiniso, kungaba amahloni kancane, angithi? Ungacabanga ngesithangami lapho ungavele uthumele ukuthi inkampani ikuvuthele kanjani kaninginingi? Zonke izinkampani ziyahluleka noma zehluleke ngasikhathi sinye…. ukukubeka konke endaweni yokugcina izinto zomhlaba ongayibona kungahle kungabi isu elihle kakhulu!
Ngezikhalazo zenkonzo yamakhasimende, ifomu lokuxhumana elihle lisebenza kahle kakhulu. Lapho amakhasimende ethukuthele ngathi, ayakwazisa ukukhipha umoya futhi, kwesinye isikhathi, angajwayela ukwenza ihaba ngokungabi namandla kanye nomthelela ebhizinisini lawo. Ukubeka isithangami akuwona umqondo omuhle… kepha ukuvumela indlela elula yochwepheshe bakho bokusekela ukuthi baphendule mathupha kumakhasimende athukuthele kuyigugu.
Umehluko omkhulu wokuziphatha phakathi kwesithangami ne-blog ukuthi ingxoxo yesithangami (eyaziwa nangokuthi 'intambo') iqalwa isivakashi. Izinkundla zivame ukuba nabaholi abangahlelekile - empeleni laba ngabantu abayalela ukunakwa okuningi noma baqondise izingxoxo zesithangami, kepha kungenzeka bangabi ngisho abamele inkampani ngokusemthethweni. I-blog inomholi osemthethweni, umbhali wokuthunyelwe.
Ingxoxo yesithangami iqala ngentambo engaqala noma ngubani, njengokucela usizo noma isikhalazo. Lokhu kusho ukuthi inkampani eqhuba isithangami kufanele isabele engxoxweni futhi ayinalo ithuba lokuhola ingxoxo. Zivikela ngokuzenzakalela, kungakhathalekile ukuthi isihloko sini. Akuvamile ukuthi ngibone ukuphawula okuhlanganisiwe kuphenduka inkundla yezikhalazo ngebhulogi ngaphandle kokuthi i-blogger icele izikhalazo. Kaningi, ngiye ngabona ukuphawula okuvutha amalangabi ngokushesha 'kucishwa' ngabanye abafundi bebhulogi - ngoba bavame ukuba ngabasekeli abakhulu bebhizinisi.
Okuthunyelwe kwebhulogi kudalwe ngumbhali wokuthunyelwe. Kubhulogi yenkampani, lokhu kuyisihluthulelo. Kungenzeka ukuthi uzivulela ukugxekwa okunikezwe isihloko seposi, kepha okuhle ukuthi uthola ukuhola ngenkuthalo ingxoxo. Abantu abaphawula ngababhalisile abeza kubhulogi yakho bezofuna ulwazi noma ubudlelwane nawe.
Kubalulekile ukuthi laba ababili bahlukaniswe ngokuziphatha nangezinhloso zezivakashi zabo, kanye nangenhloso yokusebenzisa kwabo! Abantu abahambeli ibhulogi yakho ukuyokhononda, bavakashela ukuyofunda. Futhi amabhulogi ahlinzeka ngezindlela eziphephile zokwakha ubudlelwano nabafundi bakho - ngenzuzo ye- wena ukushayela ingxoxo.
Tags: isikhwama sedijithalieloquaizinkokhelo zeselulaeduze nokuxhumana kwensimunfcisivinini sekhasiSesha Marketingisivinini sesiza
I-Oct 28, i-2007 ku-7: i-42 PM
Kuyathakazelisa. Ngicabanga ukuthi ngabe ukubambe lokhu okuthunyelwe engikubhalile emasontweni ambalwa edlule obekuzama ukuchaza ukufana phakathi kwebhulogi nesithangami. http://www.jeffro2pt0.com/similarities-between-a-blog-and-forum/ Okuhluke kakhulu phakathi kwalokhu ukuthi i-blog iyala ingxoxo ngenkathi iforamu inika abasebenzisi ithuba lokuqala eyabo ingxoxo.
Okthoba 29, 2007 ngo-7: 51 AM
Angizange, uJeffro2pt0, kepha ngizovele ngiyikhombe. Umsebenzi omuhle wokukhomba umehluko womzimba nokufana!
(Ngisemuva KONKE ukufunda kwami ​​njengamanje !!!)
I-Oct 28, i-2007 ku-8: i-14 PM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu. Kuyangimangaza ukuthi amathemba angavamile ukuthi afune izinkundla zamasayithi abo. Lapho ngimba ngijula, ngivame ukuthola ukuthi bafuna impendulo eningi yomphakathi ngaphandle kokufuna ukubhala okuqukethwe.
Ithemba labo ukuthi amakhasimende abo enza wonke umsebenzi. Ngiyayithanda impendulo yakho ngomehluko, kepha inesibindi. Amabhulogi amaningi, amaningi angasabela kabi emcabangweni wokuthi amabhulogi kufanele "alawule" ingxoxo. Ngokwami, ngicabanga ukuthi lelo iphuzu. Amabhulogi afundeka kalula kunezithangami ngoba akekho ongakumemeza phansi noma aphazamise ingxoxo kubhulogi yakho ngaphandle kokuthi ubavumele.
Futhi ezinkampanini, akukho okubaluleke kakhulu.